Xassan iyo Golaha wasiirada oo qaati kala taagan & hal arrin oo leysu heysto | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xassan iyo Golaha wasiirada oo qaati kala taagan & hal arrin oo leysu heysto
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan Aqalka madaxtooyada ayaa sheegaya in Madaxweyne Xassan Sheekh uu ku gacanseeray in Golaha wasiirada uu ka dhaadhiciyo inay Is Casilaan.
Ujeedka Xassan Sheekh ayaa ahaa in dhicitaanka Ra’isulwasaare C/weli uu u adeegsado inay wasiirada xilkooda iska Casilaan, hayeeshe waxaa taasi ka dhaga adeegay wasiirada oo aan iyagu badi ku qanacsaneyn inuu dhaco Ra’isulwasaare C/weli.
Wasiirada ayaa walaac ka muujinaaya dhicitaanka Xukuumada C/weli taasi oo lagu micneeyay inay ilaalsanayaan xilkooda maadama dhicitaanka R/W C/weli uu samey adag ku yeelanaayo islamarkaana ay ku weynayaan xilalkooda.
Xassan oo ilaa Seddex mar kulan la qaatay Wasiirada ayaa waxa uu ku gacanseeray inuu wasiirada ka helo Ififaalo muujinaaya inay Is Casilaan si ay u dhacdo Xukuumada C/weli.
Dhanka kale, Wasiirada ayaa iyagu ah kuwa ku andacoonaya inaysan dan u arag inay dhacdo Xukuumada C/weli waxa ayna Xassan u sheegen in dhowr jeer uu ballamo uga baxay iminkana taasi aysan dhaamin mida miiska u saaran.
Khilaafka Xassan iyo C/weli ayaa noqday mid marba marka xigta sii xoogeysanaaya waxaana la saadalinayaa in biyo dhiciisa uu noqon doono Bur-bur xukuumadeed.